google – ICT.com.mm
Google Chromecast (Charcoal)K85,691
Google Chromecast Ultra (Black)K141,076 K70,539-50%
Google Daydream View VR Headset (Charcoal)K146,301
Google Home Mini (Charcoal)K117,337
Google Pixel2(128GB) (White)K1,034,551
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Compact design Up to 1080p resolution Supports all wireless networks WiFi 802.11ac (2.4GHz/5GHz) HDMI plugs directly into TV Micro-USB power Stream from Android and iPhone. Enjoy thousands...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 4K Ultra Capable Plugs into HDMI Port of TV 2.4/5GHz Wi-Fi Support for faster load times Start streaming with your voice using google home Screen mirroring from...
Google Daydream View VR Headset (Charcoal)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Simple, High-Quality Virtual Reality A World of Experiences Designed for Comfort Easy to set up Made by Google Daydream View Enjoy VR withasoft, lightweight fabric...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Watch or listen to media Control TVs and speakers Plan your day Control your home Hands-free help around the house. Google Home Mini isasmart speaker...
Google Pixel2(128GB) (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Snapdragon 8354GB RAM 128 GB Storage 12.2 MP (Back) + 8 MP (Front)5inches 2700 mAh battery International Warranty Product Overview The all-new Pixel...
Google Pixel2(64GB) (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Snapdragon 8354GB RAM 64 GB Storage 12.2 MP (Back) + 8 MP (Front)5inches 2700 mAh battery International Warranty Product Overview The all-new Pixel...
Google Pixel2(64GB) (Blue)
Google Pixel2(64GB) (White)
Google Pixel3Black (4GB/64GB)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Snapdragon 8454GB RAM 64 GB Storage 8 MP + 8 MP Dual Front Camera 5.5″ Display 2915 mAh battery International Warranty Take better night pics....
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Tailored for Pixel Stylish design Comfortable Covered, anywhere you take it Materials: Nylon and polyester fabric Polycarbonate Length: 5.90 in (149.8 mm) Width: 2.85 in (72.4 mm)...
Google Pixel3Pink (4GB/128GB)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Snapdragon 8454GB RAM 128 GB Storage 8 MP + 8 MP Dual Front Camera 5.5″ Display 2915 mAh battery International Warranty Take better night pics....
Google Pixel3Pink (4GB/64GB)
Google Pixel3White (4GB/64GB)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Snapdragon 8454GB RAM 64 GB Storage 8 MP + 8 MP Dual Front Camera 5.5″ Display 2915 mAh battery International Warranty Google Pixel3ဟာ...
Google Pixel3XL Black (4GB/128GB)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Snapdragon 8454GB RAM 128 GB Storage 8 MP + 8 MP Dual Front Camera 6.3″ Display 3430 mAh battery International Warranty Take better night pics....
Google Pixel3XL Black (4GB/64GB)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Snapdragon 8454GB RAM 64 GB Storage 8 MP + 8 MP Dual Front Camera 6.3″ Display 3430 mAh battery International Warranty Take better night pics....
Google Pixel3XL Pink (4GB/64GB)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Snapdragon 8454GB RAM 64 GB Storage 8 MP + 8 MP Dual Front Camera 6.3″ Display 3430 mAh battery International Warranty Google Pixel3XL...
Google Pixel3XL White (4GB/128GB)
Google Pixel3XL White (4GB/64GB)
Google Pixel4Just Black (6GB/64GB)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Display Size: 5.7 inches Resolution: 1080× 2280 pixels Chipset: Qualcomm SDM885 Snapdragon 855 (7nm) CPU: Octa-Core GPU: Adreno 640 Operating System: Android 10 RAM:6GB ROM:...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ CPU: Intel Core i5-8220Y 1.3GHz (dual-core; 4MB cache; boost up to 3.9GHz) Graphics: Intel UHD Graphics 615 (300MHz) RAM: 8GB LPDDR3 Screen: 13.3-inch Full HD (1,920 x...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ CPU: Intel Core m3 (8th Gen) Graphics: Integrated Intel UHD Graphics RAM: 8GB Screen: 13.3-inch Full HD (1,920 x 1,080) Storage: 64 GB Integrated PCIe Ports: USB...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Give anyone access to the latest entertainment Power up in over 1M Android apps and games on Google Play Use for music, movies, TV, books, magazines, apps,...
Google Play Gift Card $25 (Key Activation via Email)